Pazuva rino munyori Noah Gordon akazvarwa | Zvazvino Zvinyorwa
Mugore 1926, asi pazuva rakafanana nanhasi, Mbudzi 11, munyori Noah Gordon akazvarwa. Iyo inozivikanwa bestseller "Chiremba" Icho chingori muenzaniso mumwe wemabhuku anoshamisa akagadzirwa nemunyori kubva pakutanga uye ndezve iro basa ratichataura nezvaro nhasi semutero mudiki kwaari. Tichakusiirawo iwe nemamwe emitsara yake yakanakisa iyo yatinoziva kuti inogutsikana yaunogara uchifarira.
1 Noah Gordon's "Chiremba"
2 Mamwe mabhuku akanaka naNoah Gordon
3 Mitsara uye makotesheni kubva kumunyori
Noah Gordon's "Chiremba"
Iyi inoverengeka inonakidza inotsanangura kuda kwemurume wezana ramakore rechigumi nerimwe kuti akunde chirwere nerufu, agadzikise marwadzo evamwe vanhu, uye ape chipo chinenge chisinganzwisisike chekuporesa chaakapiwa. Iyo inoratidzira rwendo runoshamisa rwevechidiki Rob Cole, kurwisa kwake chirwere uye kufa, chipo chake chinoshamisa chekuporesa. Kurota kwake kwekuva chiremba kunomutungamira kubva kuEngland kunotongwa nehutsinye uye kusaziva kune kushushikana kwepanyama kwePersia iri kure. Ikoko, mumayunivhesiti eArabhu, pasi pekudzidziswa kwemudzidzisi ane mukurumbira Avicenna, shanduko ichaitika iyo inoratidza mugumo wake newemhuri yake nekusingaperi.
Genre: Nhoroondo uye kushanya.
Gore rekuburitswa: 1986.
Nhamba yemapeji: 800.
Mamwe mabhuku akanaka naNoah Gordon
Kunyange zvakadaro "Chiremba" Ndokutaura nyeredzi basa raNoah Gordon, munyori anyora mamwe mabhuku akanaka kwazvo aungasaziva kusvika nhasi
"Komiti yerufu", 1969.
"Dhaimondi reJerusarema", 1979.
"MuJudha wekupedzisira", 1999.
"Sam uye Dzimwe Ngano dzeMhuka", 2002.
Mitsara uye makotesheni kubva kumunyori
«Mushonga wakafanana nebasa rinononoka rekuvaka (…). Tine rombo rakanaka kana mukati mehupenyu hwese tinogona kuisa chidhinha chimwe chete. Uye kana tikakwanisa kutsanangura chirwere ichi, mumwe munhu asati azvarwa anozokwanisa kuwana mushonga ». (Bhuku: "Chiremba").
“Unofanira kuziva kuti itsika inoonekwa neChechi sehuroyi uye chivi chekufa. Kana iwe ukandibatsira uye ivo vakatiwana, iwe uchapisa padanda zvakafanana neni. (…) -Vari kutotsvaga ini kuti vandisvire, ishe wangu chiremba. Havagoni kundipisa kanopfuura kamwe chete ». (Bhuku: "MuJudha wekupedzisira").
Vanhu vanouya kwauri vachitambudzwa nerufu nezvirwere. Mukomana ari mudambudziko nemutemo. Musikana akaita nhumbu kuseri kwedura .... -ini ndinoita zvandinogona. Dzimwe nguva ndinosvika pakubatsira. Dzimwe nguva zhinji, kwete. Dzimwe nguva hapana anogona kubatsira. Inguva chete naMwari. (Bhuku: "Rabhi").
“Ini ndaive ndichiri kufarira kunzwa hurukuro dzevadzidzi dzaitevera musangano wega wega, uye ndikaona kuti ndinonzwisisa zvandainzwa zviri nani uye zvirinani. (…) Ndakaedzwa kuzvipira kubatsira mumakirasi, asi ndakanzwisisa kuti vadzidzisi vaibhadharwa, uye ndaisada kutora muhoro wemumwe munhu ». (Bhuku: "Dr. Cole").
Usatore kuruma kubva pakuruma kwekunakirwa kusvikira iwe uine chokwadi chekuti haina kukochekerwa. (Bhuku: "Winery").
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Pazuva rino munyori Noa Gordon akazvarwa
Nhasi, Mbudzi 10, Raibhurari Zuva